Malunga nathi | Igalari ye-ROYI ART
Igalari ye-ROYI ART yivenkile yokuma eyodwa yabathandi bezobugcisa be-Intanethi abakhangela ubugcisa obugqibeleleyo bokupeyinta ngamaxabiso afikelelekayo.
Inqununu yethu ye-Alizee iintloko zegalari ye-ROYI ye-ART yaphesheya kwezorhwebo, ikwayimisebenzi yobugcisa. Kule minyaka ili-10 idlulileyo, uAlizee usebenze ngokusondeleyo noyilo lwangaphakathi, umyili wezakhiwo, igalari, umqokeleli wezobugcisa njl ... ngakumbi xa sisebenza nabo, kokukhona siziva sinokubenzela ngcono. Ngaphezu koko, uninzi lwamagcisa ethu anetalente kwizifundo ezithile okanye kubuchwephesha obuthile, sidala size siphinde, sipeyinti nganye nganye yobugcisa ngononophelo kwaye ngokuthe ngcembe. Sikwandisa ishishini lethu ngePosta.
Ipeyinti nganye kubuGcisa beRoyi yepeyintiwe ngesandla kwibhanti enobuchule.
Ngobugcisa beRoyi uthenga ngokuthe ngqo kwisitudiyo, abadali, abaqulunqi kunye namagcisa.
Siqokelele amawaka eefayile ezigqwesileyo zeoyile zehlabathi, ukusukela kwiiNgcali zoMsebenzi zaseYurophu ukuya kubuGcisa beNdalo.
Ioyile yokwenene, iibhulashi zeNene, iiArhente zoBugcisa, ubuGcisa bokwenyani.
Abanye abathengi babuza ukuba ifana kanjani phakathi kwesiqwengana sokuqala sibonisa kwi-intanethi kunye nesiqwengana esenziwe kwakhona.
Ndingathanda ukutsho ukuba asinakuthembisa ukuba uyakufumana i-IDENTICAL enye njengoko ubona kwiwebhusayithi yethu kuba zizixhobo zokwenza ubugcisa kuphela ezinokwenza ngokuchanekileyo ngendlela yantlandlolo.
Yonke imizobo yethu yepeyinti ngesandla ukuze yonke imivimbo yebrashi ingahluka. Siyakuthembisa ukuba uyakuyifumana kumgangatho ofanayo kunye nobuhle.
I-Pail Paint / I-ACRYLIC Paint / I-Canada
Siyazingca ngokubonelela nantoni na ngaphandle komgangatho ophezulu wobugcisa.
Yonke ipeyinti eyenziwe ngoochwephesha bethu ipeyintwe ngesandla kusetyenziswa ezona zixhobo zihle kakhulu ezifumanekayo. Oku kuqinisekisa ubude obude kunye nomgangatho wokugcina wokupeyinta.
Amagcisa ethu akhetha ukusebenzisa Imibala yeOliven Artist yeOlig. Izizukulwana ezintlanu zeekhemistri kusapho lakwaBlockx bezisebenza ukususela ngo-1865 ukugqibelela uMdibaniso weoyile yeBlockx.
Ipeyinti ye-Acrylic yepeyinti ekhawulezayo yokucoca i-pigment kwi-acrylice polymer emulsion. Kunyibilika emanzini, kodwa ungabi manzi xa umile. Kuxhomekeka ekubeni ipeyinti ixutywe kangakanani na ngamanzi, okanye iguqulwe ngeegels ze-acrylic, imithombo yeendaba, okanye iipastele, ukupeyinta okugqityiweyo kwe-acrylic kunokufana ne -colcolor yamanzi okanye ukupeyinta ioyile, okanye ukuba neempawu zayo ezizodwa ezingafikelelekiyo kwezinye izinto zosasazo.
UKUPaka / ROLL KWI-TUBE / EYENZIWEYO
Umgangatho wokuhambisa kwakho yinto yethu ephambili kwaye izinto esizisebenzisayo ukupakisha iimveliso zethu zibonisa ukuzinikela kwethu.
Qiniseka, ukuba iodolo yakho inodibaniso lweemveliso, ziya kuthumela ngokwahlukeneyo kwiphakheji efanelekileyo, kwaye awuyi kuhlawuliswa ukuthunyelwa okongeziweyo.
Ukupeyinta ngaphandle kwesakhelo kuya kuhlanganiswa ngeentlobo ezahlukeneyo zokugcina i-varnish, egqunywe ngephepha elikhuselayo kunye nefilimu, kwaye emva koko uqengqelwe ngenyameko kwi-tube eqinile.
Umzobo ohleliweyo upakishwe kwi-carton ene-bubble pad kwaye ii-angles ezine ziya kukhuseleka kakuhle kwimeko yomngcipheko wokuhamba.
Iqela elizinikezelweyo ukuba lifezekise iimfuno zakho
Unxibelelwano lobugcisa basimahla kunye iikowuti ezisesikweni.
Ukugcwaliseka okujikelezayo okukhawulezayo, okuhanjiswa kwilizwe jikelele.
I-100% isiqinisekiso sokoneliseka.
Sinikezela ngenkqubo ephezulu yabathengi.
Sikholelwa ukuba sonke isicelo esivela kumthengi lithuba lokuba wakheke kulwalamano olubalulekileyo.
Wamkele imibono emitsha kunye nengxelo, kunye nokwenza iinkonzo zethu ukuba zigqithe imfuno zabathengi bethu.
Ukupeyinta On Isinikezeli-Oli , Akahlali Oli Ukupeyinta , Abstract Oli Ukupeyinta , Oli Umzobo , Contemporary Oli Ukupeyinta , neeBhari lokukhwelisa , i- Zonke Products